कोरोना लागेको भए उहीँ चीनमै म’र्थें, नेपाल आउँदिन थिएँ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/कोरोना लागेको भए उहीँ चीनमै म’र्थें, नेपाल आउँदिन थिएँ
कोरोना लागेको भए उहीँ चीनमै म’र्थें, नेपाल आउँदिन थिएँ
काठमाडौ। टेकनबहादुर थापा चीनको बेइजिङबाट फर्केको चार दिन भयो। काठमाडौं आएदेखि एकपल चैनको सास फेर्न पाएका छैनन्। सतुंगल बस्ने टेकनलाई छिमेकीहरू शंकाको आँखाले हेर्छन्। धेरैले त उनीसँग बाेलीचाली पनि बारेका छन्। छिमेकीको शंका दूर गर्न उनले टेकु अस्पताल गएर जचाए, त्यै पनि धर पाएका छैनन्।
उनी आफ्नो स्वास्थ्य रिपोर्ट खल्तीमै बोकेर हिँड्छन्। सोध्न आउनेलाई त्यही देखाउँछन्। कति चुप लाग्छन्, कति नपत्याएर केरकार गर्न थाल्छन्। ‘मलाई कोरोना लागेको भए उहीँ चीनमै म’र्थें, नेपाल आउँदिन थिएँ। मेरो परिवारलाई किन सार्थें? मेरो परिवार मलाई प्यारो छैन र?’ टेकनले भने, ‘अचम्म लाग्यो, नेपालमा मैले सोच्दै नसोचेको घटना भयो।’
टेकन होटल म्यानेजमेन्टको इन्टर्नसिप गर्न दस महिनाअघि बेइजिङ पुगेका थिए। कोरोना भाइरसको प्रकोपले चीनका होटल रित्ता भएपछि उनी उतै जचाइवरी फागुन ३ गते काठमाडौं फर्केका हुन्। समस्याको सुरूआत फर्केको भोलिपल्टै भयो।
फागुन ४ गते बिहानै सतुंगल प्रहरी चौकीका इन्स्पेक्टरले उनलाई फोन गरेर भने, ‘खुरुक्क चौकी आउने कि भ्यान पठाउँ।’ टेकन तर्सिए। बाँकी यस भिडियोमा हेर्नुहोस:
कन्चनको घरमा पुगे रवि लामिछानेको मु’द्दा ल’ ड्ने वकिल , के अब कन्चनले न्याय पाउलान् ? अब के हुन्छ ? (भिडियो सहित)
सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि खुशी हुँदै ज्ञानेन्द्र शाहले सुझाब दिदै खोले यस्तो रहस्य(भिडियो हेर्नुहोस)
रबि लामिछाने घटनापछि अचानक चितवनबाटै यस्तो भिडियो आयो ! डेढ बर्षे नानीको दुवै हात कसरी गुम्यो ? (भिडियो हेर्नुस)